Niakatra ny hetra: ahina hiakatra 20% ny vidin’ny savony | NewsMada
Niakatra ny hetra: ahina hiakatra 20% ny vidin’ny savony
Nahantona ny fampiakarana ho 34% ny haba fanampiny (droit additionnel ad valorem) ho an’ny akora fanaovan-tsavony (bondillon) hafarana avy any ivelany. Etsy an-kilany, hiakatra 20% ny hetra amin’ny ladoany, raha 10% teo aloha, ny fanafarana ity akora ity, araka ny voafaritra ao amin’ny vinavina Tetibola (PLF) 2020. Entina hanohanana ity seha-pihariana savony ity no anton’ity fampiakarana ity. Tsy andoavana haba fanafarana entana ity akora ity eo amin’ny tsenam-paritry ny Comesa, izany hoe ao amin’ireo firenena mpikambana, ary ao anatiny i Madagasikara.
Sokajina entana ilaina andavanandro (PPN) ny savony. Koa, ahina tsy maintsy hipaka any amin’ny fandaniam-bolan’ny isan-tokantrano malagasy ny fisondrotam-bidiny. Maro tokoa mantsy ny orinasa indostrialy mampiasa ny “bondillon”. Handalo eny amin’ny antenimiera roa tonta ity volavolan-dalàna ao anatin’ny PLF 2020 ity, ary azo heverina fa handinika ny fisondrotry ny vidin-javatra andavanandro sy ny fiakaran’ny vidim-piainana rahateo.
Akora efa azo lazaina fa savony ny “bondillon”, hafarana avy any ivelany, fa mila fanovana hanome endriky ny savony ilaina ny fampiasa azy eto an-toerana. Manahy ny orinasa indostrialy sao misy ifandraisany amin’ny fifaninanana ity fepetra ity.